Intshayelelo yefektri -Chengdu Cast Acrylic Panel Industry Co., Ltd.
I-Chengdu Acrylic Panel Co, Ltd. (CDA) yinkampani ephethwe ngokupheleleyo liQela leMonarch. Ukudlulisela kwinkxaso yezobuchwephesha ekhokelayo ye-Mitsubishi Rayon Co., Ltd., kunye nokudibanisa i-R & D, imveliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa, i-CDA ivelisa amashiti e-acrylic phantsi kwegama likaDuke, elikwindawo ekhokelayo kwicandelo lase China kwishishini le-PMMA.
Izisombululo zamashiti e-Acrylic kuthintelo lwesandi, ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokuncitshiswa kwengxolo okubonelelwe nguDuke kusetyenzisiwe kwinani leeprojekthi ngempumelelo. Ngombulelo kukwamkelwa okuphezulu kwintengiso, i-CDA yaba lilungu leenkampani ezijongiweyo kwi "Atlas esemgangathweni yesandi isithintelo kwiNdlela yeDolophu yaseTshayina"
IMitsubishi Rayon Co., Ltd., njengeqabane leqhinga le-CDA, ibonelela ngeDuke nge-monster monomer kunye nenkxaso yetekhnoloji yehlabathi. Iinjineli eziphezulu zeMitsubishi zisebenza njengabacebisi bezobuchwephesha kwiDuke, zihlala zibeka iliso kuyo yonke inkqubo yemveliso kwaye zikhokela kwisiza ukuqinisekisa ukuba i-DUKE acrylic sheet idibana nomgangatho wamanye amazwe. Kule nkqubo yokufundisa nokufunda, uDuke uqeqeshe iqela elisezingeni lomgangatho wophando kunye nolawulo lwenzululwazi.
Siyinkampani edwelisiweyo, ikhowudi yesitokhwe 002798.
Injongo yeshishini: Thatha umthengi kuqala, uhlale uzama ukufezekisa, kwaye ugcine izibophelelo
Umbono weShishini: Yiba ngumgangatho wehlabathi we-acrylic sheet brand.
International phambili eyahlulayo umgca wemveliso oluzenzekelayo kunye nenkqubo eyodwa kuqulunqo.
Umgangatho Pharmaceutical umgangatho ukusebenza ngokupheleleyo zifakwe kunye nokusebenza thermostatic ukuqinisekisa ukhuseleko imveliso kunye nokuthembeka.
Ukuyilwa komxhuzulane othe nkqo u-20 m kuqinisekisa umgangatho kunye nemveliso efanelekileyo.
Isakhelo sokucoca ulwahlulo oluninzi ukuphelisa ukubakho kokungcola.
Ubukrelekrele bokukhulula oomatshini bokuhambisa, ukuqinisekisa umboniso womgangatho ogqibeleleyo.
Iitekhnoloji zamanye amazwe, izixhobo eziphambili, ezidityaniswe neqela elisebenza kakuhle.